7 यूरोपमा आउटडोर गतिविधिहरूको लागि उत्तम शहरहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >7यूरोपमा आउटडोर गतिविधिहरूको लागि उत्तम शहरहरू
हरियो पार्क, पैदल यात्रा ट्रेल्स डाडाहरु मा, र आरामदायक मौसम घर बाहिर रमाइलोको लागि उपयुक्त छन्. यूरोपको विश्वव्यापी शहरहरूमा सबै कुरा छ ताकि तपाईं युरोपले प्रस्ताव गर्ने सबै बाहिरी गतिविधिहरू प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ. एम्स्टर्डमको साइकलिंगदेखि म्युनिकमा सर्फिंग सम्म, यी7युरोपमा आउटडोर गतिविधिहरूको लागि उत्तम शहरहरू हो आदर्श छुट्टी गन्तव्य.
1. यूरोपमा आउटडोर गतिविधिहरूको लागि उत्तम शहरहरू: एम्स्टर्डम, नेदरल्यान्ड्स
जब शहर नदी नहरको वरिपरि बनेको हुन्छ, तपाईं बाहिर छुट्टी खर्च गर्न बाध्य हुनुहुन्छ. एम्स्टर्डम यूरोप मा सबैभन्दा साइकल मैत्री शहर को रूप मा परिचित छ. साइकल यात्रा गर्नु भनेको यातायातको साधन मात्र होईन तर स्थानीयहरूका लागि जीवनशैली पनि हो.
साइकल यात्रा यूरोपमा एक ठूलो बाहिरी गतिविधि हो, यात्रा र दर्शनीय स्थलहरूको लागि. अर्को विकल्प शहर अन्वेषण हो डु on्गामा, राम्रो पुल र डच वास्तुकला अन्तर्गत. बाटोमा, तपाईं अर्को बोवा क्याफे वा एम्स्टेल नदीको किनारमा एक आकर्षक रेस्टुरेन्टमा पिउन हप गर्न सक्नुहुन्छ.
स्वच्छ हावा, नीलो आकाश, र परिदृश्य परिवर्तन सक्रिय र आकार मा रहनको लागि सही सेटिंग को लागी बनाउनुहोस् छुट्टीमा हुँदा.
2. जेनेभा, स्विट्जरल्याण्ड
स्विजरल्याण्डसँग छ सबै भन्दा राम्रो दृश्य यूरोपमा, र जेनेभा आश्चर्यजनक प्रकृतिले घेरिएको छ. यसरी, स्थानीयहरूले उनीहरूको वरिपरिको दृश्यहरू र जमिनहरू बनाउँदछन्, बाहिर र सक्रिय रहन. उदाहरणका लागि, ताल जेनेभा, लेमन लेकको रूपमा पनि चिनिन्छ पानी खेलको लागि एक मनपर्ने हो.
डुat्गा सवारी, माछा मार्ने, कायाकिंग, पौंडी खेल्ने वा राफ्टि, जेनेभा तालमा केवल बाहिरी गतिविधिहरू मात्र गर्न सकिन्छ. तपाईं डु rent्गा भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ वा सस्तो पनि लिन सक्नुहुन्छ नौकायन मार्ग.
यदि तपाईं हिमाली व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए स्विस आल्प्सको ट्रेल्स सहरबाट टाढा छ. माउन्टेन साइकल, पैदल यात्रा, शिविर, र जाडोमा स्कीइ great जेनिभामा रमाईलो गर्न बाहिरी गतिविधिहरू हुन्.
3. यूरोपमा आउटडोर गतिविधिहरूको लागि उत्तम शहरहरू: म्यूनिख, जर्मनी
म्युनिक सबैभन्दा ठूलो घर हो सहरी पार्कहरू संसारमा, अंग्रेजी बगैचा. धेरै र हरियो भूमि बाहिरी गतिविधिहरूका लागि उपयुक्त छन्, यस प्रकार म्यूनिखको शीर्षमा राख्दै7युरोपमा आउटडोर गतिविधिहरूको लागि उत्तम शहरहरू.
अंग्रेजी बगैंचामा, तपाईं सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ, चल्दै वा चिल गरेर, मा एक पानी द्वारा पिकनिक, घामको स्नान, र पौडी खेल्नु. म्यूनिखमा बाहिरी गतिविधिहरूको लागि अर्को ठूलो स्थान मानव निर्मित ईसबाच नदी हो, अंग्रेजी बगैंचामा. यो छालहरू समात्ने र उनीहरूको चालहरूको अभ्यास गर्न सर्फरहरूको लागि मनपर्ने ठाउँ हो.
सहरमा बसिरहँदा वा गाउँमा गइरहेको छ, भियना यूरोपमा बाहिरी गतिविधिहरूको लागि भयानक शहर हो. डन्यूबमा क्रूज गर्दै, वा व्यस्त केन्द्र बाहिर Lainzer Tiergarten को लागि जाँदै प्राकृतिक आरक्षण, भियनासँग धेरै प्रकारका बाहिरी गतिविधिहरू छन् जुन कुनै पनि प्रकारका यात्रीहरूको लागि प्रस्ताव गर्दछ.
यदि तपाईं केन्द्रमा रहने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, दर्शनीय भ्रमण गर्ने उत्तम तरिकाहरूमध्ये एक सेगवे भ्रमण वा डान्यूब नदीमा यात्रा गरीरहेको हो. तर, यदि स्थानीय जस्तो भियना अन्वेषण गर्न रुचाउँनुहुन्छ भने, र यसको लुकेका रत्नहरू पत्ता लगाउँदै, त्यसो भए प्राकृतिक आरम्भ उत्तम छ.
25 वर्ग किलोमिटर वुडल्याण्ड र वन्यजन्तुहरू भियनामा सबैभन्दा ठूलो पार्क पार्कमा तपाईंको लागि पर्खिरहेका छन्. वरिपरि हिंड्नुहोस्, जोग, वा यस हरियो ओएसिसमा पिकनिक पाउनुहोस्, तपाइँको बनाउनेछ भियनेस छुट्टी पूरा.
5. यूरोपमा आउटडोर गतिविधिहरूको लागि उत्तम शहरहरू: ज्यूरिख, स्विट्जरल्याण्ड
जब अल्पाइन पहाडहरूको चुचुराहरू र ल्याण्डस्केप वरपर छन्, र अगाडि आश्चर्यजनक ताल, तपाईं यूरोपमा बाहिरी गतिविधिहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो शहरहरू मध्ये एक हुन बाध्य हुनुहुन्छ. ज्यूरिख एक रमाईलो र जीवन्त शहर हो, जहाँ तपाईं यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ SZU ट्रेनलाई अवलोकन टावरमा. अवलोकन टावर यूटेलबर्गमा अवस्थित छ, वरपरको दृश्यहरूको साथ शहरको सुन्दर पहाड.
तपाईं पैदल यात्रा चाहनुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाई केन्द्रबाट चल्न सक्नुहुनेछ युटिलबर्गबाट ​​विभिन्न पर्वतारोहण ट्रेल्सको माध्यमबाट. ज्यूरिखमा अर्को ठूलो बाहिरी गतिविधि नदीको दाँया किनारमा रमाईलो गर्दै छ, समुद्र तट भलिको खेलमा वा आराम गर्नुहोस्, फ्लसबाड ओबरर लेटेनमा, स्थानीयहरूको ह्याout्गआउट स्थान.
यदि तपाईं यसलाई ज्युरिखको पर्यटकको रूपमा गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसोभए लिममेष्टचिफर्टको वरिपरि क्रूजको लागि डु boat्गामा जानुहोस् जुन तपाईंलाई शहरको अधीनमा लैजान्छ7पुल.
ट्रेन द्वारा ज्यूरिखको लागि इन्टरलाकेन
ट्रेनबाट ज्युरिखबाट लुसारिन
ट्रेन द्वारा लुगानो ज्युरिख
जिनेभा ट्रेन बाट ज्युरिख
6. राम्रो, फ्रान्स
चलिरहेको छ वा समुद्रमा बिहानको पौडी खेल्ने आनन्द लिइरहेको छ, सब भन्दा उत्तेजित गतिविधिहरु मध्ये एक हो. तपाईं छुट्टीमा हुँदा पनि, सक्रिय र आकार शेष मा संग रहन स्थानीय खानाको स्वाद लिदै र आफुलाई लाड पार्ने. यी सबैको शीर्षमा, फ्रान्सेली रिभिएराले तपाईलाई उत्प्रेरित गर्छ र ऊर्जा र भिटामिन सीको साथ फ्यूज गर्दछ जब एक सक्रिय मनस्थिति अद्भुत महसुस गर्दछ.
राम्रो एक अद्भुत शहर हो युरोपमा बाहिरी गतिविधिहरूको लागि. समुद्री किनारमा घोडा सवार, पौंडी खेल, सिशेलहरू खोज्दै, र सूर्यास्तमा पिकनिक भएको सबै उत्कृष्ट आउटडोर गतिविधिहरू हुन् फ्रान्सेली रिभिएराको सबै भन्दा राम्रो आनन्द लिन.
7. यूरोपमा आउटडोर गतिविधिहरूको लागि उत्तम शहरहरू: फ्लोरेन्स, इटाली
फ्लोरेन्स इटालीको सबैभन्दा सुन्दर शहरहरू मध्ये एक हो. तपाईले शहर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सबै पर्यटकहरू, वा पूर्ण विशेष र अविस्मरणीय तरिकामा. हिंड्ने वा साइकलिंग यस स्थलहरू र दृश्य पोइन्टहरू दुई राम्रो आउटडोर गतिविधिहरू फ्लोरेन्समा हुन्.
तथापि, यदि तपाईं दुई असाधारण बाहिरी गतिविधिहरू प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ भने, र युरोपमा केहि राम्रा बाहिरी गतिविधिहरू, त्यसपछि तातो एयरको बेलुन उडान र स्काइडाइभि try प्रयोग गर्नुहोस्. फ्लोरन्सको आर्किटेक्चर र पार्कहरू आश्चर्यजनक छन् र माथिको दृश्यले शाब्दिक रूपमा तपाईंको सास टाढा लैजानेछ.
यदि तपाइँ पर्यटकहरूको भीडलाई हराउन र नयाँ बाहिरी गतिविधिहरू प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ भने, त्यसोभए फ्लोरेन्स युरोपमा बाहिरी गतिविधिहरूको लागि अचम्मको शहर हो.
ट्रेन द्वारा जेनोवा फ्लोरेन्स
ट्रेन बाट Parma गर्न फ्लोरेन्स
ट्रेन द्वारा मिलान मा फ्लोरेंस
ट्रेन द्वारा भेनिस फ्लोरेन्स
युरोपमा आउटडोर गतिविधिहरू
युरोप आश्चर्यचकित छ. तपाईको युरोप यात्राको संख्या जस्तोसुकै भए पनि, त्यहाँ सँधै नयाँ साहसिक कार्य हुन्छ. हाम्रो7युरोपमा आउटडोर गतिविधिहरूको लागि उत्तम शहरहरू साहसी र थ्रिल खोज्ने यात्रुहरूका लागि उपयुक्त छन्. साथै, तपाईं ती लाई मात्र सुन्दर घर बाहिर र परिदृश्य अन्वेषण गर्न को लागी.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई यी कुनै पनि बाहिरी गतिविधिहरूमा सस्तो ट्रेन टिकटहरू फेला पार्न मद्दत गर्न खुशी हुनेछौं.
के तपाईं हाम्रो ब्लग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ “युरोपमा आउटडोर गतिविधिहरूको लागि For उत्तम शहरहरू” तपाईंको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?URL = https://www.saveatrain.com/blog/cities- आउटडोर- एक्टिविटीज- युरोप / اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
गतिविधिहरु frenchriviera outdoor OutdoorActivities Tranride रेल यात्रा traintravelgermany यात्रा यातायात स्विट्जरल्याण्ड TravelVienna